नेपालमा रअको षडयन्त्र
दीर्घराज प्रसाई - -
दीर्घराज प्रसाई– भारतीय गुप्तचर संस्था रअ भनेको छिमेकी देशहरूलाई दुःख दिन, कब्जा गर्ने, वदनाम गर्न बनाइएको संस्था हो । इन्दिरा गान्धीले सिक्किम खाएपछि भनेकी थिइन्– ‘सिक्किमलाई बुलेट प्रयोग गरेर कब्जा गरियो, नेपाललाई ब्यालेट प्रयोग गरेर कब्जा गर्नुपर्छ ।’ यो रणनीति अनुसार कांग्रेस (आई)ले नेपाल खान ठूल्ठूला षडयन्त्रहरू गर्दै आएको हो । भारतमा नरेन्द्र मोदीको सत्ता आएपछि रणनीतिमा केही हेरफेर भएको छ ।
कांग्रेस (आई) की नेतृ सोनीयाँ गाँधीैको आड र ‘रअ’ कै निर्देशनमा २०६३ जेष्ठ ४ गते एमाले, माओवादी, कांग्रेसले ‘रअ’ कै निर्देशनमा विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य नेपालमा जनताको अभिमतबिना इसाईकरण गर्न धर्मनिरपेक्ष घोषणा लादियो । त्यसको भोलिपल्ट दी टाइम्स अफ इण्डियाका स्तम्भकार जग सुरैयाले लेखेका थिए– ‘अव भारतले अमेरिकासँग भन्दा चीनसँग सम्वन्ध सुधारगर्दै नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर चीन र भारतले खानुपर्छ’ ।
त्यही धारमा एसडी.मुनीले पनि नेपालको तराई भारतले खानुपर्छ भनेर लेक्छन् । तर भारतमा नरेन्द्र मोदीको सत्ता आएपछि भारतको रणनीतिमा केही हेरफेर भएको अनुभव हुन्छ ।
भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीका नेताहरूले देशद्रोेही पहिचान बनाए । धर्मनिरपेक्षको दौडानमा दौडिएका कम्युनिष्टहरूलाई क्रिस्चियनहरूले पैसाको लोभ देखाएर हिन्दु तथा बौद्ध बिरोधी बनाए । नेपालकै पार्टीका नेताहरूलाई छानी छानी हातमा लिएर भारतीय प्रशासनीक संयन्त्र–साउथ ल्वकको नेपाल माथि थिचोमिचो गर्दैआएको छ ।
हिमवतखण्डका थुप्रै हिन्दु राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्थापित विश्वको एक मात्र ’हिन्दु अधिराज्य’ भारत लगायत संसारका हिन्दुहरूको ठूलो आस्था छ । नेपाल अधिराज्य बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, मगर, गुरूड, तामाड, दमाई, कामी, सार्की आदि र पछि लिम्बु, राई, मैथिली, भोजपुरी, थारू, राजबंसी वासी जाति–जनजाति, तथा मुसलमान आदिको सहयोगबाट सिर्जना भएको राष्ट्र हो । नेपाल अधिराज्यको एकीकरण भएका बेलादेखि नेपाल राजासंस्थाको संरक्षणमा बाँचेको हो । राजा महेन्द्रको सिद्धान्त थियो– नेपाल र नेपाली मिलेर राष्ट्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनले यही धरातलमा स्वदेशी पाठ्यक्रम, स्वदेशी मुद्रा, राष्ट्रभाषा, कला, साहित्यलगायत यावत् क्षेत्रमा अहोरात्र दिगो काम गरेर जग बसाए । नेपाल कसैको संरक्षित क्षेत्र होइन, स्वाधीन राष्ट्रको सन्देश दिए ।
२०१७ सालदेखि २०२८ सालसम्म राजा महेन्द्रबाट उठाइएका कदम, नीति निर्णय र कूटनीतिक प्रयत्नमा उच्चस्तरका बुद्धिजीवी, प्रखर कूटनीतिज्ञ र क्षमतावान् व्यक्तित्वले ठूलो सहयोग गरेका थिए ।
राजसंस्था धराशायी बनाउन बाह्यशक्तिले ठूलो षड्यन्त्र भयो तर राजाका वरिपरि क्षमतावान्, असल, दूरदर्शी, अध्ययनशील तथा विवेकीहरू भइदिएको भए परिस्थिति सम्हाल्न गाह्रो थिएन । पञ्चायतकालमा पनि राष्ट्रियता बाँकी थियो । गिरिजाले त्यसलाई आर्यघाट पु¥याए । यो क्रम निरन्तर जारी छ । राष्ट्रघात भइरहेछ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरू राष्ट्रवादी शक्ति थिए, २०६२ सालदेखि भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’को खेतला भए ! कम्युनिष्टहरूको राट्रवादी चरित्र हरायो ! नेपालका कम्युनिष्टहरू सत्ता कब्जा गर्ने र अकुत सम्पत्ति जोड्नेमा मात्र छन् ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान संधि र विक्रम संवत् २००७ सालको दिल्ली संझौताको बिरोधमा उत्रिएकाले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो । सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान संधि र २००७ सालको दिल्ली संझौताको कम्युनिष्टहरूले बिरोध गरेकाले २००८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी भारतको इशारामा नेपालमा प्रतिबन्धित भयो । पछि राजा महेन्द्रले २०१३ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाएका थिए । यस हिसावले कम्युनिष्टहरू आत्म सम्मानमा सक्रिय थिए ।
क्रमिक रूपमा कम्युनिष्टहरू विभाजित हुन लागे । कोही सोभियत रूसको पक्षधर, कोही चीनिया कम्युनिष्टको समर्थक, कोही भारतीय कम्युनिष्टका पक्षधर हुँदै विभिन्न खेमामा विभाजित भएपछि नेपालका कम्युनिष्टहरूमा नेपाली राट्रवादी चरित्र हराउँदै गयो ।
अव विदेशीहरूको नाङ्गो हस्तक्षपबाट मुक्त भएर देश बचाउन नेपालका सम्पूर्ण पार्टीभित्र र बाहिरका देशभक्तहरूको संयुक्त प्रयासमा नेपालको सार्वभौम अस्तित्व र पहिचानहरू कायम राख्न विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य र राष्ट्रिय एकताको आधार स्तम्भको रूपमा स्थापित राजसंस्थाको संरक्षणमा नेपालका सबै जातीहरूलाई नेपालको भौगोलिक,जातीय र सांस्कृतिक विविधताभित्रका हिमाल, पहाड, तराईका सबै फूलहरू समानरूपमा फूल्न पाउनसक्ने सहअस्तित्व आधारबाट हाम्रो देशको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको समन्वय र सन्तुलन कायम गर्दै नेपालको उज्वल भविष्य निर्माणमा हामी सबै एकतावद्ध भएर सरिक हुनसकौं । वर्तमान समयले हामी सबैलाई असफलताबाट सफलतातिर लाग्न घचघच्याइरहेकोछ, नबुझे हामी मैनवत्ती पग्लेजसरी सकिने छौं ।